PEPPER "FIRCOON F1": SHARAXAAD, SAWIR - BEER CAGAARAN
Suugada macaanka ama buluugta ah waa mid aad loo jecel yahay, gaar ahaan noocyo hore u bislaaday, oo kuu oggolaanaya inaad dhakhso u goosatid ka hor bilawga hawada qabow. Fircoon F1 waxay ku guulaysatay meel u qalantaa, ma aha oo kaliya si dhakhso ah u rarayso, laakiin sidoo kale waxaa lagu gartaa miraha weyn ee dhadhan fiican leh. Kala duwanaantan ayaa kordhi karta adigana, haddii aad barato shuruudaha daryeelka dhirta.
Sharaxaad isku dhafan
Pepper "Fircoon F1" - waa noocyo isdhexgal ah, taas oo ah, laga soo dhex maro noocyo hore. Waxaa laga soocay noocyo kale oo leh korodhka iyo bislaanshaha hore, iyo sidoo kale suurtogalnimada in laga beerto labada dhulka iyo beeraha.
Waa muhiim! Pepper "Fircoon", sida noocyo kale oo isku dhafan, ma aha mid ku habboon dhalmada by abuurka la soo ururiyey si madax bannaan, tan iyo tayada ay lumo. Seeds waxay u baahan yihiin in la iibsado sanadkiiba.
Ku xoortay geedaha geedka wuxuu ka kooban yahay asliga ah ugu weyn, kaas oo laanta caleemaha ka baxsan. Kuwa dhawaan soo muuqday - jilicsan iyo cagaar, waxay noqdaan kuwo adag. Heerka baadiyaha waa mid dhexdhexaad ah, qaabkuna si fudud ayuu u faafaa. Caleemaha cagaaran, oo kor u kaca, koraan on petioles. Inta u dhaxeysa petioles iyo laantu waxay koraan ubaxyada. Warshadu waxay noqon kartaa mid is-pollulated ama cayayaanka.
Si aad u dillaacdo hore waxaa loo saari karaa noocyo nooc ah basbaas sida "Flamenco f1", "Claudio F1", "Atlas" iyo "Orange Miracle".
Madaarka waa mid casri ah, dhexdhexaad ah macaan, waxay leeyihiin dhadhan aad u fiican, dhumuc adag oo qoto dheer - illaa 8 mm qaro weyn, u ekaanshaha qaabka prism-ka ah, qulqulaya. Bilowga bilawgii, waxay yihiin midab huruud ah. Haddii waqtigan aan la nuugin, si tartiib tartiib ah u leexo, oo ku daboolan maqaarka dhalaalaya. Kala duwanaanshahan waxaa lagu gartaa miraha waaweyn oo culeyskiisu yahay 160 g, kuwaas oo loo qaybiyey 3 ama 4 qol. Iyaga ayaa ka mid ah abuurka midab huruud ah, dabaq, qaabab wareegsan.
Pepper "Fircoon F1" wuxuu ku beeray habka seedling. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad isku diyaariso abuurka: ujeedadaas waxay u baahan yihiin in lagu daadiyo biyo kulul ilaa 50 ° C una tagaan barar. Taas ka dib, biyaha waa la miiray, miraha waxaa lagu duuduubay maro qoyan oo tagay ilaa 2 maalmood. Hadda waxay diyaar u yihiin inay soo degaan.
Abuurka beeraha waxaa lagu sameeyaa 10 ilaa 20 Maarso. Lakabka laf-dhabarka iyo lakabka yar ee carrada, oo ah in la nadiifiyo oo si fiican loo bacrimiyo, ayaa lagu shubaa weelal diyaarsan. Abuurka ugu sarreeya waxaa lagu daboolay carrada, rusheeyeen dhulka, waraabiyey iyo daboolay foornada. Waraabinta soo socota ayaa la sameeyaa ka dib muuqaalka caleemaha ugu horeeya. Biyaha waraabinta waa ka wanaagsan inaad qaadato diiran.
Noocyada Hybrid ee basbaas waa mid joogto ah, oo waxaa ku jira Gipsi F1, Gemini F1 iyo Kakadu noocyo.
Marka labada caleemood ee hore u muuqdaan geedo, dhirta waxaa la bacrimiyey - 1 g of Bacriminta potassium, 0.5 g of ammonium nitrate iyo 3 g of superphosphate waxaa lagu kala diri 1 l oo biyo ah. 2 toddobaad kadib, habka ayaa lagu celiyaa, kordhinta qiyaasta 2 jeer. Tan iyo dhirta uu aad u jiran yahay ka dib marka la soo qaado, waxaad si tartiib tartiib ah ugu shubi kartaa ciidda weelka ilaa heerka cotyledon.
Waa muhiim! Heerkulka ugu wanaagsan ee koritaanka "Pharaoh F1" - laga bilaabo 20 ilaa 25°C haddii ay ka yartahay 12°C, ma kori doono, sidaa darteed abuur ah ayaa lagu beeray on geedo bartamihii March, iyo geedo yihiin transplanted dhul furan bartamihii May.
Goob loo beeray ayaa horey loo doortay. - waa in laga ilaaliyaa qoraallada, si fiican u iftiimay, 3 sano meeshan waa inaanan korin eggplants, yaanyada, baradhada iyo habeenkii kale. Dhul wanaagsan ka dib bocorka, kaabajka, digirta, dalagga xididka ah. Xilliga dayrta, goobta ayaa u baahan in la qodo, bacrinimo leh fosfateer iyo bacriminta potash at heerka of 50 g halkii 1 sq. m. Bacriminta dabiiciga ah waxaa lagu dabaqaa qiyaasta 5 kg halkii 1 sq m. Guga, carrada waxaa la bacrimiyey leh amooniyam amooniyam (40 g) iyo jeermis daris ah buluuga ah (1 qaado oo qasi ah biyo). Waqtiga xiga ee ciidda waxaa la bacrimiyey 2 toddobaad kadib ugxan. Wixii geedo beerto waxay u fiicantahay inaad dooratid maalin daruuro leh ama aad ku isticmaasho fiidkii. Markaad beerto, isticmaal 40 xabbo 40 sentimitir, adoo tixgelinaya in dhererka sariirta uu noqon doono ugu yaraan 25 cm, iyo inta u dhaxaysa safafka waa 70 cm. In cayayaanka ku talinaynaa in ay ku shub qolofka ukunta jar jartey ama ash qoryo. Ka dib markii laga beerto, basbaaska waxaa lagu waraabiyaa biyo kulul at heerka of 1-2 litir 1 per a geedka, iyo marka biyaha la nuugo, waxay mulch leh caws engegan ama peat. Fiiri "Fircoon F1" wuxuu jecel yahay waraabinta inta badan (1 jeer toddobaadkii, kuleylka - 2 jeer), laakiin haddii ay dhacdo mulching waxaad ku cabi kartaa 10kii maalmoodba mar.
Baro sida loo abuuro basbiil geedo iyo sida loo koro geedo tayo leh.
Waraabinta waxaa lagu sameeyaa asalka, miraha iyo caleemaha laguma talin in la waraabiyo. Isticmaalka biyaha waa inuu ahaadaa: 12 litir 1 digrii. m Marka marka geedka uu bilaabo inuu ubaxo oo uu midho dhalo, isticmaalka wuxuu noqon doonaa 14 litir 1 garaac. m, iyo inta jeer ee waraabinta waa inay noqdaan 2-3 jeer toddobaadkii. Daryeelka maskaxdu waxa kale oo ka mid ah dabcinta ciidda, hillinta, ka saaridda cawska, burburinta, iyo qoryaha sida loo baahdo. Si loo dabciyo ciidda si qoto dheer oo aan ka badnayn 5 cm, si aanay u waxyeeleynin xididada. Dhirta geedka waxaa la sameeyaa 2 xagal, inta soo hartay ayaa la saaraa, iyo laamoodo daciif ah ayaa sidoo kale la gooyaa. Deriska oo ah basbaas "Fircoon F1" wuxuu noqon karaa dhir kasta oo dheer oo awood u leh inuu ka ilaaliyo dabaysha. Kaliya ha ku beerin meel u dhow basbaaska kuleylka - iskutalaabista iskutallaabtu waxay horseedi doontaa xaqiiqda ah in dhammaan basbaaska ay noqon doonaan qadhaadh. Haddii aad qorsheyneyso inaad ku beerto "Fircoon F1" ee aqalka dhirta lagu koriyo, ka dibna heerkulka ciidda waa in lagu hayaa 15 ° C heerkulka hawada 20 ° C. Nidaamka dhirta iyo xaaladaha daryeelka basbaasku waxay la mid yihiin abuurista dhul furan, laakiin beeritaanka aqalka dhirta lagu koriyo ayaa la samayn karaa horaantii.
Kala duwanaan duwan ee basbaasku ma saameeyo cudurrada fayraska (strick, tubaako, iwm.), Laakiin waxaa laga yaabaa inay u xanuunsato maqnaanshaha magnesium ee ciidda. Xaaladdan, calaamadaha waxay u muuqdaan kuwa la mid ah cudurada viral - caleemaha qallalan, hoos u dhac. Heerkulka hooseeya, biyaha dib u dhigga ama, si tartiib tartiib ah, sidoo kale waxay leedahay saameyn xun.
Sidoo kale akhri sida loola tacaalo cudurrada iyo cayayaanka basbaas.
Cudurada waxaa lagu ogaan karaa fungal:
verticillosis - fangaska oo keena miro iyo wilting geedka. Si looga hortago, waxaa lagu talinayaa in si taxadar leh loo beero geedo si aanay u waxyeeleynin xididada;
kala duwanaan - waa caan ku ah basbaasta sii kordhaysa ee lagu koriyo, waxay ka timaaddaa kala duwanaanta heerkulka. Wixii dagaalka la isticmaalayo dareeraha Bordeaux;
lugta madow - waxay ku dhacdaa heerkul hoose iyo qoyaan badan. Si looga hortago, waxaa lagula talinayaa in la ilaaliyo heerkulka iyo xaaladaha waraabinta, si aan u ridin ciidda ka hor beerashada. Si loola dagaallamo isticmaalka loosening ee ciidda iyo buufinta daroogada;
daadinta - dabeecadda geedo, oo si tartiib tartiib ah u dhinto. Wixii dagaal ah ee la isticmaalayo daawooyinka antifungal;
barafka lagu arkay - dhirta ayaa u muuqda dhibco guduudan, kordhaya cabirka, on basbaaska mugdi ama siddooyin huruud ah ayaa la sameeyay. Wixii dagaal ah ee la isticmaalayo daawooyinka antifungal;
cad, cawl ama ciriiri leh - muuqaalka dhirta, dhirta dhirta. Si loola dagaallamo isticmaalka fungicides, dhirta bukaanka ayaa laga saaraa. Habka ka hortagga waa u hoggaansanaanta shuruudaha beerashada.
Cayayaanka ayaa sidoo kale khatar ah:
Aphid - Cayayaanka yaryar ee nuugaya casiirka ka soo jilicsan. Si loola dagaallamo isticmaalka sunta cayayaanka ama daaweynta dadka.
Caarada caarada - Naas-nuujin ku nool dhinaca hoose ee caleemaha, calaamaduhu waa shabak yar oo caleemo ah. Warshad waxaa lagu daaweeyaa faleebo oo toon ah ama basasha oo leh caleemo iyo lowska cirifka.
Slugs - Cayayaanka kuwaas oo baabi'iya oo kaliya caleemaha, laakiin sidoo kale midhaha. Well waxay ka caawisaa loosening ciidda, rushaynaya budada iniin khardal le'eg.
Colorado duqsiyo - loogu talagalay ka-hortagga, waxaa lagu talinayaa in la beero dhoobada birta ah ee ku xiga, taas oo urta taas oo duqsigu ka cabsanayo. Dagaalka ka soo horjeeda cayayaanku waa inuu soo ururiyo musqulaha gacanta, ku buufinta tincture of celandine.
Ma taqaanaa? Tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay baradho qamriga Colorado ee sannadkii 1824, wuxuu ku faafay adduunka oo dhan wuxuuna noqday cudur ba'an oo dhab ah, laakiin Norway, Japan, Danmark, Ireland, Tunisia, Israel, Sweden, Algeria, iyo Morocco weli ma yaqaanaan.
Khudradda "Fircoon F1" ayaa midoobaya 62-65 maalmood laga bilaabo qashinka, halka ay jiraan 2 nooc oo qaangaadh ah:
Dhaqdhaqaaqa farsamo, miro ayaa noqda jaalle, oo leh biological - casaan. Asal ahaan, waxay ka soo goosanayaan xuduudaha marxaladahaas oo qaangaar ah.
Goynta ayaa bilaabmaysa bartamihii July-dhammaadkii dhammaadkii dhammaadkii Agoosto. "Fircoon F1" waxaa loola jeedaa noocyo sarraysa, laga bilaabo 1 sq. m square, waxaad ka qaadan kartaa ilaa 7.5 kg oo ah basbaas. Midhaha bisilka ee basbaas waa in si joogto ah loo saaro (4-5 maalmood kasta), haddii kale ubaxu wuxuu noqdaa mid gaabis ah. Miraha aan la goostin ka hor bilawga ah ee barafku si liidata ayaa loo keydiyaa.
Midhaha basbaaska "Fircoon" ayaa ku haboon in loo isticmaalo cusbo, la qaboojiyey, la kariyay, la qalajiyey, lakulay, la shiilay iyo noocyo kale.
Ma taqaanaa? Miraha basbaaska waa rag (oo leh 3 qol) iyo haween (oo leh 4 qol).
Miro ka mid ah lab ah ayaa ku haboon u shaqaynta nadiifinta, iyo haweenka - isticmaalka cusub, maadaama ay yihiin macaan.
Baro hababka kala duwan ee basbaaska goosashada jiilaalka.
Cabitaan casiir ah oo la shiiday ayaa loo isticmaalaa daawada dhaqameed ee daaweynta:
yaraanta iodineka iyo dhibaatooyinka tayroodh;
yaraynta heerarka gulukoosta;
ciribtirka dhibaatooyinka beedka;
kicinta qandhada caloosha;
ka hortagga xinjiro dhiig.
Basbaas macaan ayaa lagula talinayaa kuwa raba inay ilaaliyaan quruxda iyo dhalinyarada maqaarka, si ay u hagaajiyaan xaaladda timaha iyo ciddiyaha. Madaarka waxaa lagu keydin karaa meel qabow ilaa 2 bilood.
Faa'iidooyinka basbaaska "Fircoon F1" waxaa ka mid ah:
caabbinta cudurku (fayraska tubaakada);
Soodhawaynta degdegga ah ee gaadiidka iyo kaydinta;
fursad ay ku beerto dhul furan iyo lagu koriyo.
Faa'iidooyinka kala duwan ee noocaan ah waxaa ka mid ah:
Uma habboona abuurista abuurka.
Wuxuu jecel yahay jawi diiran.
Wuxuu u baahan yahay ciid wanaagsan oo dabacsan.
Wuxuu u baahan yahay waraabinta joogtada ah.
Badbaadinta looga soo horjeedo barafka iyo qaboojiyaha ayaa muhiim ah.
Fiiri "Fircoon F1" - waa noocyo kala duwan oo isku dhafan, khudradda ujeedada korodhsiinta. Waa thermophilic mana u dulqaadanayo naqshadaha, laakiin waqti gaaban oo farabadan oo badan oo u bislaadaan muddo dheerna u bislaadaan. Haddii aad siiso xaalado ku habboon beerahooda, waxaad dareemi kartaa dhadhanka iyo faa'iidooyinka khudradda.
Clover: sida loo isticmaalo siderata
Isticmaal iyo xulashada mashiinnada caanaha ee riyaha
Sida loo doorto gawaarida beerta, noocyada caadiga ah iyo noocyada dhirta
In Ukraine, si rasmi ah u bilaabay mashruuc caalami ah ee horumarinta miyiga
Gacan-ku-dhajin iimaan-yari - sharaxaad iyo sawirro kala duwan, talooyin ku saabsan koritaanka guriga iyo banaanka
Qarniyo badan, bani-aadmigu wuxuu ahaa beeralay, la dagaallama noocyo kala duwan oo cayayaanka iyo cudurrada dalagyada kala duwan. Hababka halista ah ee marmar caawiyay badanaaba ma habboonaan maanta, ka dibna cayayaanka waxay galayaan halganka waxsoosaarka. Waa maxay cayayaanka suntan? Cayayaanka ayaa inta badan lala xiriiriyaa sunta, kuwaas oo aan had iyo jeer run ahayn: walxaha noocan oo kale ah waxay qaataan qaabka sterilizers iyo kormeerayaasha koritaanka. Read More
Xakameyn wax ku ool ah cirbadaha